Fiberglass rebar ho an'ny mivaingana - vokatra & lisitry ny vidiny
+1 (347) 705-78-08 (manampy. 576182)
Fiberglass manamafy ny refes
Fiberglass masonry bolongana
Famatorana rindrina mitambatra
Tsangambato vita amin'ny vera
Fanaovana kajy Rebar
Fanamafisana azo itokisana tsy misy vy
Ny fanamafisana Fiberglass dia mihoatra ny vy amin'ny endri-javatra ara-teknika maro ary mora vidy kokoa!
Mankanesa ao amin'ny katalogin'ny rebar Tombontsoa rehetra
Izy io dia malaza manerana izao tontolo izao
Fiberglass rebar dia ampiasaina amin'ny fananganana any Etazonia, Canada, Japan, Europe, Australia, Asia ary Afrika.
Manaova fandaharana Tetikasa maro kokoa
Fanamafisana ny bolongana
Manolo ny vy sy ny harato harona ny valan-jotra Fiberglass - matanjaka kokoa, maivana kokoa, mora vidy kokoa ary matevina kokoa. Ny plastika plastika dia tsy mamorona tetezana mangatsiaka amin'ny rindrina.
Katalaogy mavesatra Katalaogy masonry
Feno fampiharana maro
Ny fanamafisana ny bolongana dia azo ampiasaina amin'ny indostria, fanamboaran-dàlana, fananganana trano tsy miankina, fanamafisana ny firafitry ny morontsiraka. Izy io dia miavaka amin'ny fanamafisana ny tranon'ny siansa sy ny fitsaboana.
Applications Ny tetik'asa
Azontsika atao ny mandefa ny baikonao eran'izao tontolo izao. Miasa eo ambanin'ny fitsipiky ny INCOTERMS 2010 miaraka amin'ny fepetra momba ny FCA. FOB, CIF na CFR. Ny fitaterana ny fanamafisana mitambatra dia mora lavitra noho ny vy.
Momba anay Momba ny fanaterana
Mitady mpivarotra izahay
Midira hiaraka amin'ny ekipanay ary ho lasa mpivarotra voalohany amin'ny fitaovana fananganana maoderina hita ao amin'ny faritra misy anao
Ny antsipiriany misimisy momba ny mpivarotra Mifandraisa aminay
Ny fanaraha-maso famokarana hentitra
Mifidy tsara ny mpamatsy akora mpamatsy akora isika ary mifehy isaky ny famokarana. Izahay mitsapa matetika ny vokatrao.
tombony Manaova fandaharana
Fiberglass rebar & harato ho an'ny beton
Fiberglass rebar dia ampiasaina eran'izao tontolo izao - any Etazonia, Kanada, Japon ary firenena eropeana - nanomboka tamin'ny 1970th. Ireo firenena mandroso tamin'ny taon-jato farany dia nahatsapa fa tena mahasoa tokoa ny fampiasana ny fibre de verre azo ampiasaina. Manolotra rebar misy diamondra isika avy amin'ny 4 ka hatramin'ny 22 mm. Azo atao ny manamboatra rebar hatramin'ny 32 mm araka ny fangatahan'ny mpanjifa tsirairay.
Composite (fiberglass) harato no ampiasaina hanamafisana ny gorodona, ny arabe, ny seranam-piaramanidina sy ny rafitra simenitra hafa. Ity dia fanoloana matanjaka vy harato. Manolotra harato misy vavahady samy hafa izahay: 50 * 50 mm, 100 * 100mm, 150 * 150 mm, 200 * 200 mm ary 300 * 300 mm. Azo atao ny manamboatra haben'ny fanokafana ny harato hatramin'ny 400 * 400 mm araka ny fangatahan'ny mpanjifa tsirairay. Ny savaivony tariby misy: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm ary 8 mm. Natolotra tamin'ny horonana na ravina.
Masonry harato dia ampiasaina hanamafisana ny masonry trano amin'ny biriky sy biriky. Savaivony tariby - 2 mm. Nomena amina horonana misy safidy malalaka - 20 cm, 25 cm, 33 cm na 50 cm. Raha mila sakany hafa ianao dia azonao atao ny mividy horonana 1m ny sakany ary manapaka azy amin'ny lohan'ny fanapahana.
Iza isika sy ny tombotsoantsika
KOMPOZIT 21 no mpamokatra lehibe indrindra any Rosia. Mamokatra rebar 4 metatra mihoatra ny 0.4 metatra izahay ary 2 mln mXNUMX isan'ora isan-taona. Ny tombotsoantsika dia: vidiny ambany, kalitao ambony fitaovana ary ny fifehezana kalitao tsy takatra. Manolotra vokatra manerana izao tontolo izao izahay.
Rebareba avo lenta
Tehirizo ny vidin'ny fandefasana
Fihetsika malefaka ambany
Ny frp rebar dia avo 8 heny noho ny vy, izay mampihena ny lanjan'ny rafitra sy ny vesatra amin'ny fototra nefa tsy manam-pahefana.
Ny safidin'ny frp dia azo antoka amin'ny fahasalaman'ny olombelona ary tsy misy radionoflides manimba. Ny fiarovana ny vokatra dia nohamafisin'ny fanamarinana momba ny fahadiovana.
Mampihena be ny fonao na dia manao metaly aza ianao miaraka amin'ny sakamandrefan'ny rebar. Ambonin'izany, raha mihevitra ny famerenan'ny hery ianao dia mahatratra hatrany amin'ny 50% ny tahiry.
Vonjeo amin'ny fandefasana ianao noho ny lanja maivana. 3000 metatra frar rebar mifanentana amin'ilay vatan'ny fiara iray. Io habetsaka io dia ampy hanamafisana ny fanorenan'ny teheva amin'ny trano antonony.
Hihena ny fandaniana amin'ny fitazonana ny trano. Ny fananganana nohamafisina tamin'ilay seranana fiberglass dia mitaky hafanana kely kokoa noho ilay fanamafisana vy.
Miorina mandritra ny taona maro ianao! Noho ny fanoherana simika avo sy ny faharatsiana amin'ny fanamafisana ireo fitaovana miangona, dia mihoatra ny 100 taona ny fotoam-piainan'ny serivisy fibre vita amin'ny konkora (raha ampitahaina amin'ny analogues vy).
Mampiasa firakofana mihanahana avy amin'ny dielectric izay tsy mitondra herinaratra ianao, koa mihamitombo ny fangaraharana onjam-peo ary mampihena ny fitarihan'ny sehatry ny elektromagnetika
Manamboatra tranobe tsy misy «tetezana mangatsiaka» ianao, satria ny fanamafatanana ny fibre dia tsy mitondra hafanana, tsy toy ny vy. Ho an'ny firenena manana toetrandro mangatsiaka, maika ny olana amin'ny fatiantoka amin'ny hafanana sy ny fandefasana ny rindrina, ny gorodona ary ny fananganana.
Manatsotra ny fizotran'ny fanaingoana sy hampiakatra ianao ary hampihena ny vidin'ny asa. Izay miasa rehetra dia afaka mitantana frp rebar miaraka amina fitaovana sy ezaka kely faran'izay bitika.
Fa maninona no misafidy ny rebar fiberglass antsika?
Mamokatra bara plastika any Russia izahay ary tsy mampiasa afa-tsy akora matanjaka avo lenta avy amin'ireo mpamokatra malaza manerantany. Noho ny fanatsarana ny tsingerin'ny famokarana sy ny famokarana, dia ambany ny vidin'ny vokatray. Mahasoa anao izany.
Hifidy ny fomba fitaterana tena mety sy mora vidy izahay ary handamina ny fandefasana na aiza na aiza toerana misy ny planeta.
Volume'ny famokarana ambony
Ny diamterer takiana dia azo alaina foana, satria miasa 24/7 izahay.
0.7 $/ isaky ny metatra (10 mm rebar)
Fiadiana amin'ny faharatsiana. Miforitra amin'ny simika marobe ary miorina tsara rehefa milentika anaty rano.
Hery. Minumum valuse dia 1000 MPa.
Weight. 8 isa ambany ambany noho ny vy. Mora fitaterana.
Fametrahana. Mora tapingina. Tsy ilaina ny welding.
Toeram-pahasalamana. Tsy mitondra hafanana. Fitondran-tena mafana - 0.35 W / m * ° C.
Cost. Ny vidiny mora, ny serivisy mora ary ny asa fanompoana lava, izay mampihena ny vidin'ny tetikasa.
Fitondrana elektrika. Tsy mitondra herinaratra.
Transparency EMI / RFI. Aza manelingelina amin'ny radio sy tamba-jotra tsy misy tariby. Tsara ho an'ny faritra misy radara, antenna, kabinetra elektrika ary efitrano MRI.
Modulus ny elastika - 55 GPa
2.21 $/ isaky ny metatra (10 mm rebar)
Ny fitrandrahana sy ny haintany dia azo atao. Mila arofanina miaro amin'ny tontolo marefo.
Herin'ny tensile - 390 MPa.
Mety mila fitaovana manokana ianao raha manainga sy kamio lehibe hitaterana entana.
Ny fanenanana sy ny fanendahana amin'ny fitaovana manokana dia takiana.
Mandeha hafanana. Ny maha-kaefidratsy ny fitondran-tena mafana dia avo 12 heny avo - 25 W / m * ° C.
Vidiny fihazonana ambony
Mifangaro amin'ny marika EMI / RFI.
Modulus ny elastika - 200 GPa
Miombon-kevitra amin'ny Politika fiarovana fiainan'olona
Mampiasa mofomamy mba handrindrana tsara ny tranokalantsika Raha manohy mampiasa tranonkala ianao, dia heverinay fa mety aminao izany.OkPolitika fiarovana fiainan'olona